Li Keqiang (Shiineys: 李克强; dhashay 1-da Luulyo 1955) waa siyaasi Shiine ah oo hadda ah Premier League ee Golaha Gobolka Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha. Dhaqaaleyahan xirfad ahaan, Li waa madaxa dowladda Shiinaha sidoo kale waa mid ka mid ah shakhsiyaadka hormuudka ka ah Shiinaha arrimaha Dhaqaalaha iyo Dhaqaalaha, Arrimaha Dibadda, Amniga Qaranka iyo Dib u habeynta. Isaguna waa xubintii labaad ee ka tirsan Guddiga Joogtada ah ee Politburo ee Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha, oo ah hay'adda ugu sarreysa ee go'aan gaarta dalka. Li waa qayb weyn oo ka mid ah "jiilka shanaad ee hoggaaminta Shiinaha" oo uu weheliyo Xoghayaha Guud Xi Jinping. Li wuxuu liiska shaqsiyaadka ugu awooda badan aduunka u aqoonsaday liiska 12-aad ee aduunka ugu awooda badan sanadihii 2015 iyo 2016
Li wuxuu ka soo dhex baxay darajooyinkiisa ka qayb qaadashadiisii ​​Ururka Dhalinyarada Shuuciga. Laga soo bilaabo 1998 ilaa 2004, Li wuxuu soo noqday Badhasaabka Henan iyo xoghayaha xisbiga ee gobolka. Laga soo bilaabo 2004 ilaa 2007 wuxuu noqday Xoghayaha Xisbiga ee Liaoning, xafiiska ugu sareeya siyaasada ee gobolka. Laga soo bilaabo 2008 ilaa 2013, Li wuxuu ahaa ku-xigeenka koowaad ee ku-xigeenka koowaad ee Premier-ka ee Wen Jiabao, isagoo kormeerayay faylalka ballaadhan oo ay ku jiraan horumarinta dhaqaalaha, xakamaynta qiimaha, maaliyadda, isbeddelka cimilada, iyo maaraynta dhaqaalaha.
Marka la fiiriyo khibradiisa Ururka Dhalinyarada, Li guud ahaan waxaa loo arkaa inuu yahay saaxiibka siyaasadeed ee hogaamiyihii hore Hu Jintao. Li wuxuu qabtay jagada Premier ee 2013, wuxuuna sahlay in dowladda Shiinaha ay mudnaanta siiso u wareejinta kororka dhoofinta iyo in diiradda la saaro isticmaalka gudaha. Li wuxuu sidoo kale ahaa xoog weyn oo ka dambeeyay hirgalinta "dib u habeyn balaaran" oo lagu dhawaaqay dayrta 2013.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Li_Keqiang&oldid=206113"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Oktoobar 2020, marka ee eheed 03:09.